Cuntooyinka Kordhiya Xusuusta Maskaxda | XidigAcademy
Cuntooyinka Kordhiya Xusuusta Maskaxda
Shukulaatada Madow: Rumayso ama ha rumaysan, waxa cad in shukulaatadu laga sameeyay midhaha digirtu ay wax badan u ka qayb qaadato hawsha maskaxda. cilmi-baadhis ayaa lagu ogaaday in shukulaatada, gaar ahaan , tan a ku badan tahay maadada “Alflavanol” ay wanaajiso socodka dhiigga ee goobaha muhiimka ah ee maskaxda. Waxaana fiican in la qaato laba saacadood ama saddex ka dib cunista , sidaa darteed waxaa lagu talinayay in la cuno shukaalatada madow.
Saliida Xabxabka : Waxay faaidooyin badan u leedahay maskaxda waxay ka hortagaa cudurka faaliga, waxay caawin kartaa dadka xusuustooda ay hoos u dhacday.
Kafeega: Waxaa ku jirto maadada loo yaqaano Caffeine oo ku kordhiso awoodda maskaxda waxaana laga helaa fir-fircooni dheeraad leh, waxay jidhka ka dhigtaa jidh firfircoon, waxayna arrintaas kaa saacideysaa inaad noqoto shaqsi u diyaar ah inuu qabto shaqada ama waxbarashada. Halkii koob oo kafee ah wuxuu kaa caawinayaa inaad isticmaasho awood dhammaystiran ee maskaxdaada.
Ukunta ama beedka : Ukunta waxa ay qofka ka dhigtaa mid xasuustiisu aad u fiican tahay, waayo waxay nafaqo badan siiyaa maskaxda, taasoo qofka ka caawisa in maskaxdiisu kaydiso macluumaad badan, xasuus ahaanna noqoto mid aad u wanaagsan, waxaana ukunta digaaga laga helaa oo ku badan maadada Omega-3 Fatty Acid, taasoo awoodda maskaxda kor u qaadda.
Cuntooyinka kale ee uroon maskaxda waxaa ka mid ah huruuda, brocoli-ga, midhaha lowska ee loo yaqaan “walnut” iyo midhaha blueberries.